Hakodate! Best उत्तम पर्यटक आकर्षण र गर्नु पर्ने कुराहरु - Best of Japan
टेकलाइट रात माटो हाकोडाटेबाट हिउँदको दृश्य, जाडो मौसम, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
होक्काइडोमा हाकोडाटे धेरै सुन्दर बन्दरगाह शहर हो र यो पर्यटकहरूमा लोकप्रिय छ। मलाई पनि यो मन पर्छ र प्रायः जान्छु। हाकोडेट स्टेशनको वरपर बिहानी बजारमा, तपाईं रमाईलो र रमाईलो समय लिन सक्नुहुनेछ। हाकोडाटेयामाबाट रातको दृश्य पनि उत्तम हो। यस पृष्ठमा, म हाकोडेट परिचय दिनेछु।
दक्षिणी होक्काइडोमा हाकोडाटे जनवरीदेखि मार्चसम्म हिउँले ढाकिएको छ। यस समय हकोडाटे अति सुन्दर छ। बजारमा एसियाची भनिने समुद्री खाना चामलको कचौरा पनि उत्तम छ। Hakodate को लागि एक भर्चुअल यात्रा गरौं! विवरणको लागि कृपया तलको लेख हेर्नुहोस्। हाकोडाटेपम्यापको सामग्रीहरूका फोटोहरू ...
हाकोडाटेमा गर्नका लागि उत्तम चीजहरू
तपाईं ओनुमा पार्क वा मत्सुमा किन भ्रमण गर्नुहुन्न?
Hakodate Hokkaido को दक्षिणी छेउमा अवस्थित एक शहर हो। यो सप्पोरो र Asahikawa पछि होक्काइडो मा तेस्रो शहर हो। धेरै संख्यामा पर्यटकहरू प्रत्येक वर्ष यस शहरको भ्रमण गर्छन्। किनकि हकोडेटसँग धेरै आकर्षक दर्शनीय ठाउँहरू छन्। आउनुहोस् हामी कस्तो प्रकारको दृष्य हेर्ने ठाउँहरू कंक्रीटमा छन्।
Hakodateyama को माथि सम्म केबल कार, Hakodate, Hokkaido द्वारा minutes मिनेट मा पुग्न सकिन्छ
यो माउन्ट हुन सक्छ। हाकोडाटे कि हाकोडाटे भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू पहिले जान्छन्। हाकोडाटे यसको सुन्दर रात दृश्यका लागि प्रसिद्ध छ। समुद्रले घेरिएको, शहरको बत्तीहरू चम्कन्छ। माउन्ट हाकोडेट स्थान हो जहाँ तपाईं यो रातको दृश्य धेरै सुन्दरताका साथ देख्न सक्नुहुनेछ।
माउन्ट हाकोडाटे एउटा सानो पहाड हो जुन लगभग 334 XNUMX मीटरको उचाईको साथ छ। यो पहाड ज्वालामुखी गतिविधिबाट जन्मिएको थियो। सुरुमा यो पहाड टापु थियो। यद्यपि यस टापुबाट पृथ्वी र बालुवाका कारणले हाकोडाटेको वर्तमान क्षेत्रको जन्म भएको थियो।
माउन्टको शीर्षमा Hakodate त्यहाँ एक बड़ा अवलोकन प्लेटफर्म र रेस्टुराँ र पसलहरु संग पूर्ण छ। हामी रोपवेमार्फत यस अवलोकन प्लेटफर्ममा जान सक्दछौं। शिखरमा तपाईले 360 XNUMX० डिग्रीको अद्भुत दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। घमाइलो दिनमा, यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईंले हुनशुलाई समुद्रमा देख्न सक्नुहुन्छ।
माउन्ट हाकोडाटे २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पूर्व जापानी सेनाको गढी थियो। सर्वसाधारणलाई यस पहाडमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको थियो। यो युद्ध पछि थियो कि मानिसहरूले यस पहाडबाट रातको दृश्य देख्न सक्थे।
लामो समय सम्म जनताको प्रवेश निषेध गरिएकोले यस पहाडमा प्रकृति धनी रहेको थियो। माउन्टमा धेरै हिमाली ट्रेल्स छन्। हाकोडाटे, खुट्टा देखि माउन्टेन टुप्पोमा तपाईं एक घण्टामा चढ्न सक्नुहुन्छ।
१--19, मोटोमाची, हाकोडाटे-शि, होक्काइडो, जापान नक्सा
0138०१23-२3105- (१० ((माउन्ट.कोकोडे रोपवे)
■ खुल्ने समय ／ १०: ००-२२: ०० (अप्रिल २ 10-अक्टुबर १ 00), १०: ००-२१: ०० (अक्टोबर १ 22-अप्रिल २ 00)
Ope रोपवे राउन्ड यात्रा ／ १,२1,280० येन (वयस्क), 780० येन (बच्चा)
* २ बर्ष उमेरका बच्चाहरू नि: शुल्क सवारी गर्न सक्छन्।
* एक पूर्व स्कूल शिशु years बर्ष वा माथिका एक वयस्क संग साथ नि: शुल्क सवारी गर्न सक्छन्। प्रति वयस्क दुई वा बढी शिशुहरूको मामलामा, बच्चाहरूको भाँडा तिर्नै पर्छ।
Hakodate बिहान बजार
इकोरा र समुद्री अर्चिन बाउल हकोडाटे मार्निंग मार्केट = शटरस्टकमा
हाकोडाटे मार्केटमा तपाईं स्क्विड पनि समात्न सक्नुहुन्छ
दोस्रो दर्शनीय स्थल म तपाईंलाई हाकोडाटमा सिफारिस गर्न चाहान्छु हकोदेट बिहानको बजार हो जुन जेआर हाकोडेट स्टेशनको एकदम नजीक छ। तपाईं आज बिहान बजार देखि बिहान १ 14 बजे सम्म आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
हाकोडाटे मार्निंग मार्केटमा त्यहाँ ताजा समुद्री खाना र फलफूलहरू बेच्ने धेरै स्टोरहरू छन्। केही पसलहरूमा एक्वेरियम हुन्छ, तपाईं त्यहाँ स्क्विडहरू आदि समात्न सक्नुहुन्छ तपाईंले समात्नु भएको स्क्विड मौकेमा पकाइनेछ।
यस बिहान बजारमा सब भन्दा लोकप्रिय एक स्वादिष्ट समुद्री खानाको कचौरा हो। चामलमा धेरै ताजा समुद्री खानाहरू छन्। तपाईं आफ्नो मनपर्ने समुद्री खाना छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। समुद्री खाना कटोराको धेरै रेस्टुरेन्टहरू छन्।
यहाँ समुद्री खाना साँच्चै स्वादिष्ट छ। पहिले, म यहाँ आफ्ना बच्चाहरूलाई समुद्री खानाको भाँडो खान दिन्छु। त्यसो भए, मेरो बच्चा जसले खान मन पराउँदछ "धेरै चोटि" म यहाँ बस्न चाहन्छु! "
-9 -१ W वाकामात्सुचो हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०-6-१-00: ०० (जनवरी-अप्रिल),:: ०-14-१-00: ०० (मे-डिसेम्बर)
ऐतिहासिक Kanemori गोदाम जिल्ला मा पर्यटकहरु हिउँ दिन को मजा। हाकोडाटे पोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार = शटरस्टकमा खोलिने पहिलो जापानी बन्दरगाहहरू मध्ये एक थियो
Kanemori Aka Renga Soko स्थित छ १० मिनेट हाकोडाटे बिहान बजार बाट पैदल यात्रा। यसले रातो ईट्टाले बनेको गोदामहरू समावेश गर्दछ। यी गोदामहरू पुनर्निर्मण मार्फत धेरै पसल र रेष्टुरेन्टहरू साथ दर्शनीय स्थलहरूको रूपमा पुनर्जन्म भएका छन्। यहाँ खोलिएका रेस्टुरेन्टहरू धेरै स्वादिलो ​​हुन्छन्। मलाई कन्वेयर बेल्ट सुशीको पसल मन पर्छ।
Hakodate एक बन्दरगाह शहर हो। उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यमा, हाकोडाटेले आफ्नो पोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बन्दरगाहको रूपमा विदेशमा खोले। त्यस पछि, हाकोडाटेको व्यापारमा धेरै विकास भयो। बन्दरगाहको गोदामहरूले शेष शेष छन्।
म मोटोमाची र हकोडाटेयामा भ्रमण पछि यस रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्ने छु। रातमा, म यहाँ धेरै सुशी खान्छु र हाकोडेट बिहानको बजार नजिकैको एउटा होटलमा बस्छु। र अर्को बिहान .... यो नियमित यात्रा कार्यक्रम हो जब म हाकोडेटमा जान्छु।
१-14-१२, स्यूहिरो-चो, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय
* उपहार पसल::: -9०-१-30: ००
* हाकोडाटेट बियर हल: ११: -11०-२२: ०० (हप्ताका दिन), ११: ००-२२: ०० (सप्ताहन्त र छुट्टिहरू)
* बेइसाइड भोजनालय मिनाटो-नो-मोरी: ११: -11०-२१: (० (साप्ताहिक दिन), ११: ००-२१: (० (सप्ताहन्त र छुट्टिहरू)
Closing बन्द हुने दिन ／ वर्षको अन्त्य, नयाँ वर्ष छुट्टीहरू
Hachimanzaka Slope Hokkaido Hakodate Japan मा
रूखहरूमा मोशनको धमिलोपना, हाकोडेट हार्बरमा सिधा सडकको माथिल्लो पहाडबाट याट हेर्नुहोस्। हावा र हिउँ तूफान आउँदैछ मोटोमाची एरिया, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा
हकोडाटे, होक्काइडोमा अर्थोडक्स गिर्जाघर
तपाईले हकोडाटमा भ्रमण गर्दा म निश्चित रूपमा सिफारिश गर्दछु कि एक क्षेत्र मोटोमाची हो।
हाकोडाटे शहर हो जसले १ th औं शताब्दीको मध्यमा जापानमा पहिलो पटक विदेशमा आफ्नो बन्दरगाह खोलेको थियो। विदेशी देशहरूसँग व्यापार सुरु गरेको परिणाम स्वरूप धेरै विदेशीहरू हाकोडाटेमा बस्न आएका छन्। तिनीहरूले माउन्टेनको नजिक राम्रा पश्चिमी घरहरू बनाए। हाकोडाटे र त्यहाँ बस्थे। यस तरिकाले, "मोटोमाची" भन्ने कुनामा जन्म भएको थियो।
मोटोमाचीसँग धेरै ढलानहरू छन्। यस कारणका लागि, मोटोमाची पैदल हिड्न केहि शारीरिक तंग छ, तर सबै हालतमा कृपया ढलान माथि जानुहोस्। तपाईं माथिको चित्रमा देखाइए जस्तै सुन्दर दृश्यहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
मोटोमाचीलाई घुमाउँदा, पहिला कतै चौरमा जाऊ। जब तपाईं पहाडको टुप्पोमा पुग्नुहुन्छ, हामी माउंट तर्फ बढौं। हकोडाटे अलि अलि गर्दै दृष्य भ्रमण गर्ने ठाउँहरू हेर्नुहोस्। यस तरीकाले तपाईं धेरै चोटि माथि र तल नपुगी कुशलताकासाथ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
मोटोमाचीमा जान ट्राम प्रयोग गर्दा, उदाहरणका लागि, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु निम्न प्रकारको सर्नको लागि।
१. ट्रामबाट "Suehiro-cho" मा उतर्नुहोस्
२. नजिकैको "मोटोइजाका ढलान" मा जानुहोस्।
पुरानो ब्रिटिश वाणिज्य दूतावासका लागि उद्देश्य
Mot. अगाडि मोटोमाची पार्कमा लैजानुहोस्
Old. पुरानो हकोदेट सार्वजनिक हलमा भ्रमण
Ach. पहाडको टुप्पोबाट हचिमान्जाका ढलान हेर्नुहोस्
Russian. रूसी अर्थोडक्स चर्च द्वारा रोक्नुहोस् ...
यो केवल एक उदाहरण हो। मोटोमाची वरिपरिको यात्रा पछि, तपाई माउन्टमा जानु पर्छ। Rodway साथ Hakodate। त्यसोभए, तपाईं दक्षतासाथ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
डाटा (मोटोमाची पर्यटक सूचना केन्द्र)
१२-१-12, मोटोमाची, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०-9-१-00: ०० (अप्रिल-अक्टुबर),:: ०-19-१-00: ०० (नोभेम्बर-मार्च)
पुरानो फोर्ट गोरियोकाकु
गोरियोकाकू गोरियोकाकु टावरबाट देखियो। गोरियोकाकु हिउँद, हाकोडाटे, होक्काइडो = शटरस्टकमा उज्यालो छ
गोरिओकाकू गोरियोकाकू टावर, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापानबाट देखीएको जस्तै
हकोडाटे मजिस्ट्रेट घर गोरियोकाकू, हकोडाटे, होक्काइडोमा पुनर्निर्माण गरियो
गोरियोकाकु टावरमा वसन्त समय, अग्रभूमिमा पूर्ण-खिलिएको चेरी फूलहरूको साथ = शटरस्टक
गोरियोकाकू टोकुगावा शोगुनेटले निर्माण गरेका थिए जसले १ Japan1866 in मा जापानमा शासन गर्‍यो। टोकुगावा शोगुनेटले हाकोडेट बन्दरगाहलाई विदेशतिर खोल्ने निर्णय गरे र हाकोडाटेको रक्षाको लागि यस किल्ला बनाए। तिनीहरूले पश्चिमी वास्तुकलाको प्रविधिहरू जस्तै फ्रान्सले सिकेका थिए र जापानी महलबाट पूर्ण भिन्न भिन्न आकारको साथ यसलाई महल बनाए। तिनीहरूले यो किल्ला समुद्रबाट टाढा बनाएका थिए क्षति कम गर्नका लागि शत्रुको बेडिको समुद्रबाट गोली हान्यो भने पनि।
१ 1867 मा, टोकुगावा शोगुनेट पतन भयो र नयाँ सरकारको स्थापना भयो। यससँगै गोरियोकाकू पनि नयाँ सरकारको नियन्त्रणमा आए। जे होस्, टोकुगावा शोगुनेटको केही शक्ति इडो (अब टोकियो) बाट होक्काइडोमा भागे र हकोडाटेलाई आक्रमण गरे। नतिजा स्वरूप, गोरियोकाकूलाई अघिल्लो टोकुगा शोगुनेटको फौजले कब्जा गर्यो। त्यस पछि, "हाकोडाटे युद्ध" नयाँ सरकारी सेनाहरू र पूर्व टोकुगावा शोगुनेट बीचमा भयो। नयाँ सरकारी सेनाले भारी ताकतले गोरियोकाकूलाई पुनः प्राप्त गर्‍यो।
गोरियोकाकूलाई नयाँ सरकारको सेनाले प्रयोग गरेको थियो, तर १ 1914 १ in मा यो नागरिकहरूको लागि पार्कको रूपमा खोलियो। यस समयमा, धेरै चेरी रूखहरू लगाइएको थियो। २०० 2005 मा वर्तमान गोरियोकाकु टावर स्थापना गरिएको थियो र २०१० मा टोकुगावा शोगुनेटको युगमा निर्माण गरिएको "हाकोडेट मजिस्ट्रेट अफिस (बुग्योसो)" को एक हिस्सा पुनःस्थापित गरियो।
गोरियोकाकु हरियो मा धनी छ र हामी वसन्त, गर्मी, शरद, जाडो, सुन्दर प्रकृतिबाट जब तपाईं भ्रमण गर्नुहुन्छ हामी प्रशस्त छौं। म तपाईंलाई ड्रप गर्न चाहान्छु यदि तपाईं हाकोडाटे आउनुभयो भने।
, 44, गोरियोकाकु-चो, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०-5-१-00: ०० (अप्रिल-अक्टुबर),:: ०-19-१-00: ०० (नोभेम्बर-मार्च)
■ प्रवेश शुल्क Char नि: शुल्क
हाकोडेट मजिस्ट्रेटको कार्यालय (बुग्योसो)
-44 3--XNUMX, गोरियोकाकु-चो, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०-9-१-00: ०० (अप्रिल-अक्टुबर, अन्तिम प्रविष्टि १:18::00)), 17: ०-45-१-9: ०० (नोभेम्बर-मार्च, अन्तिम प्रविष्टि १:00::17:00)
Closing अन्तिम दिन ／Dec.31 - Jan.3, र मर्मतका लागि
Entrance प्रवेश शुल्क ／ 500 येन (वयस्क), २ y० येन (विद्यार्थी, बच्चा), नि: शुल्क (प्रिस्कूल बच्चा)
-43 9--XNUMX, गोरियोकाकु-चो, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ००-१-8: ०० (अप्रिल २१- अक्टूबर २०),:: ०-00-१-19: ०० (अक्टोबर २१ - अप्रिल २०),:: ००-१-00: ०० (जनवरी १)
प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर को शुरू देखि फेब्रुअरी को अन्त सम्म, Goryokaku रातमा उज्यालो छ। यस अवधिमा, गोरियोकाकु टावर 9: ०० देखि १ from: ०० सम्म खुला छ।
■ प्रवेश शुल्क ／ ०० येन (वयस्क), 900० येन (जूनियर हाई स्कूलको विद्यार्थी, उच्च माध्यमिक विद्यार्थी), 680० येन (एलिमेन्टरी स्कूल विद्यार्थी)
हाकोडाटमा रेट्रो डिजाइनको स्ट्रीटकारमा चढ्न सम्भव छ
हाकोडाटे शहरमा, ट्रामहरू (स्ट्रिट कारहरू) धेरै उपयोगी छन्। यदि तपाईं ट्रामहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सजिलै हाकोडेट स्टेशन, मोटोमाची, गोरियोकाकु, युनोकावा ओन्सेन र अन्यमा जान सक्नुहुन्छ। हालसालै, रेट्रो गाडीहरू देखा पर्‍यो, पर्यटकको लोकप्रियतालाई आकर्षित गर्दै। विवरणका लागि कृपया माथि शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस् र सम्बन्धित साइटहरू हेर्नुहोस्।
युगावा ओन्सेन एक तातो वसन्त रिसोर्ट हो जसले होक्काइडो प्रतिनिधित्व गर्दछ। तातो स्प्रि withहरू र र्योकन (जापानी शैलीको होटल) सहितको होटल अपराधा छन्, हकोडाटे, होक्काइडो
धेरै होटेल र र्योकन एक राम्रो आउटडोर बाथ, हकोडाटे, होक्काइडोले सज्ज छन्
युनोकावा ओन्सेनमा बोटानिकल बगैंचामा, बाँदरहरूले जाडो, हाकोडाटे, होक्काइडोमा तातो स्प्रि enjoyहरूको आनन्द लिन्छन्।
के तपाईंलाई थाहा छ तातो स्प्रि ?्ग टोकियोको सब भन्दा नजिक कहाँ छ? त्यो हकोडाटमा युनोकावा ओन्सेन हुन सक्छ। किनभने यो तातो वसन्त एयरपोर्टको तत्काल वरपर हो। तपाईं होटलको तातो स्प्रि springमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ २ घण्टा पछि टोक्योको हनेडा एयरपोर्ट छोड्दा।
युनोकावा ओन्सेन हाकोडाटे एयरपोर्टबाट by मिनेट कारमा अवस्थित छ। यसले लगभग minutes० मिनेट लिन्छ ट्राम वा बस प्रयोग गरेर हकोडाट स्टेशनमा। बसबाट १ घण्टा लाग्छ शिन-हाकोडेट होकुटो स्टेशनमा जहाँ शिन्कानसेन आउँछ र छुट्छ।
युनोकावा ओन्सेन हाकोडाटे एयरपोर्टबाट हकोडाट शहरको लागि यात्रा गर्दै थिए। त्यसोभए, जब तपाईं हाकोडाटे एयरपोर्टमा आइपुग्नुहुन्छ, किन तपाईं युनोकावा ओन्सेनको होटेलमा बस्नुहुन्न र त्यसपछि हाकोडेट शहरको होटलमा जानुहुन्न? । यसको विपरित रूपमा, तपाईं हाकोडाटे शहरको होटलमा बस्न सक्नुहुन्छ, र अन्तमा युनोकावा ओन्सेन होटेलमा तातो स्प्रि enjoyको आनन्द लिनुहोस्।
हाकोडाटे शहर आकर्षणले भरिएको छ, तर युनोकावा ओन्सेन पनि एक स्थान हो जहाँ तपाईं निश्चित रूपमा बस्न चाहनुहुन्छ। सबै भन्दा आकर्षक कुरा समुद्रको नजिक हुनु हो। म युनोकावा ओन्सेनमा एउटा रोयकन (जापानी शैलीको होटल) मा बसेँ। त्यो र्योकान समुद्रको अगाडि थियो। कोठाबाट मैले रातमा जहाज फिशिंग स्क्विडको बत्तीहरू देखें। यो एक धेरै शानदार दृश्य थियो। जाडोमा तपाईले हिउँ समुद्रको सतहमा उडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। विन्डोबाट यस्तो दृश्य हेर्दै र त्यसपछि स्वादिष्ट खाना खाएर तपाईं ओन्सेनमा प्रवेश गरेर उत्तम समय व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ।
होटल बुकि When गर्दा, कृपया कोठा समुद्र छेउमा छ कि छैन जाँच्नुहोस्।
युनोकावा ओन्सेनको एक उष्णकटिबंधीय वानस्पतिक बगैंचा छ। त्यहाँ जाडोमा बाँदरहरूले ओन्सेनमा पनि प्रवेश गर्छन्। परिस्थिति धेरै राम्रो छ, तपाई पक्कै पनि चाखलाग्दो तस्वीर लिन सक्नुहुनेछ।
हाकोडाटे ट्रपिकल बोटानिकल गार्डन
-3-१११,, यूनोकावा-चो, हाकोडाटे, होक्काइडो, जापान नक्सा
■ खुल्ने समय ／:: ०-9-१-30: ०० (अप्रिल-अक्टुबर),:: ०-18-१-00: ०० (नोभेम्बर-मार्च)
■ अन्तिम दिन ／ डिसेम्बर २ to देखि जनवरी १
Entrance प्रवेश शुल्क ／ 300 येन (वयस्क), १०० येन (प्राथमिक र
कनिष्ठ हाई स्कूल विद्यार्थीहरू)
यदि तपाईं अधिक प्रकृतिको भव्य दृश्यको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई ओनुमा पार्कमा जान सिफारिस गर्दछु। ओनोमा पार्क हकोडाट स्टेशनबाट एक्सप्रेस द्वारा २० मिनेटको दूरीमा छ। तपाईं विभिन्न गतिविधिहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई इतिहास मनपर्‍यो भने, हाकोडेटको गोरियोकाकु देखे पछि मत्सुमा महलमा जानु राम्रो विचार हो। निम्न लेखहरूमा मैले यी दर्शनीय स्थलहरूको बारेमा परिचय दिएँ, त्यसैले कृपया यसमा क्लिक गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाईं हाकोडाटेट वरिपरि यात्रा गर्न र अझै भव्य प्रकृतिको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, म ओनुमा पार्कमा जान सिफारिस गर्दछु। ओनोमा पार्क हकोडेट केन्द्रको लगभग १ km किलोमिटर उत्तरमा दर्शनीय स्थल हो। त्यहाँ, तपाईं वसन्त, गर्मी, शरद winterतु, र जाडो को सुन्दर प्रकृति का आनंद लिन सक्नुहुनेछ। ओनुमा पार्कमा क्रुजिंग, क्यानोइ,, माछा मार्ने, साइक्लि, गर्ने, क्याम्पि and गर्ने र स्कीइ as जस्ता विभिन्न गतिविधिहरू सम्भव छ। कृपया ओनुमा पार्कको सबै प्रकारको भ्रमण गर्नुहोस्। सामग्रीको तालिकाउन्नमा पार्कमा गर्नु पर्ने उत्तम चीजहरूःनुमा पार्क: जाडोमा गर्ने सबैभन्दा उत्तम चीजहरूअनुमा पार्क: वसन्त, ग्रीष्म ,तु, शरद inतुमा गर्नुपर्ने उत्तम चीजहरू ओनुमा पार्क टुनुमा पार्कमा गर्नुपर्ने उत्तम चीजहरू, २० मिनेट बाट "सुपर होकुटो" बाट व्यक्त गर्नुहोस् जेआर हाकोडेट स्टेशन (लगभग minutes० मिनेट यदि यो नियमित ट्रेन हो भने) ओनुमा पार्कको बीचमा, त्यहाँ माउन्ट छ। Komagadake। यो एक सक्रिय ज्वालामुखी छ 16 मीटर उचाई संग। यस पहाडको ज्वालामुखी गतिविधिले गर्दा धेरै दलदलहरू यस पहाड वरिपरि बनिएका थिए। प्रतिनिधि ओनुमा हो। ओनुमामा १०० भन्दा बढी साना टापुहरू छन्। ओनुमा यसको सुन्दर दृश्यको लागि प्रसिद्ध छ। ओनुमा पार्कमा, जेआर हाकोडाटे स्टेशनबाट "सुपर होकुटो" व्यक्त गरी लगभग २० मिनेट (यदि यो नियमित ट्रेन हो भने .० मिनेट)। यदि तपाईं बस प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो लगभग minutes० मिनेट जति JR हाकोडेट स्टेशनबाट ओनुमा पार्क सम्म हुन्छ। यो हकोडाटबाट धेरै नजिक छ त्यसैले तपाईं ओनुमा पार्कको एक दिनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। ओनुमा पार्क वरिपरि धेरै राम्रा रिसोर्ट होटेलहरू छन्, ताकि तपाईं विभिन्न गतिविधिहरू लाई चुनौती दिएर चुनौती दिन सक्नुहुन्छ ...
मत्सुमा-चो होक्काइडोको दक्षिणी भागको टुप्पो हो। धेरै वसन्तहरु यहाँ प्रत्येक वसन्त Maतु मा Matsumae महल मा चेरी फूलहरु हेर्न आउँछन्। हत्कोडेटको गोरियोकाकूको साथ होक्काइडोमा बाँकी रहेका केही महलहरूमा मत्सुमा महल एक हो। यस पृष्ठमा म मत्सुमा महल प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामग्रीको तालिका मत्सुमा महल होत्काइडो चेरीमा फूलहरू मात्सुमा महलमा रहेको एकमात्र जापानी महल हो जसलाई तपाईंले मात्सुमा-चो मा देख्नु पर्छ मत्सुमा महल होक्काइडोमा एक मात्र जापानी महल हो, १ th औं शताब्दीको मध्यमा मत्सुमा, होक्काइडो मत्सुमा कास्टल थियो १ts०19 मा मत्सुमा क्लान द्वारा। यो महल भन्नु सानो कुरा थियो। यद्यपि, १ th औं शताब्दीमा यस इलाकामा विदेशी जहाजहरू प्रायः देखा पर्ने भएकोले, त्यस समयमा जापानमा शासन गर्ने टोकुगावा शोगुनेटको आदेशले एउटा पूर्ण किल्ला निर्माण गरिएको थियो। यसरी १ 1606 19 मा वर्तमान आकारको मत्सुमा महलको जन्म भयो। सन् १1854 मा, जापानमा टोकुगावा शोगुनेट पतन भयो, नयाँ सरकारको स्थापना भयो। यस समयमा टोकुगावा शोगुनेटका केही फौजहरूले जहाजको नेतृत्व गरे र होक्काइडोमा भागे। तिनीहरूले हाकोडाटे ओगटे र मत्सुमा क्यासललाई पनि आक्रमण गरे। मत्सुमा महल केवल केहि घण्टामा हटाइएको थियो। टोकुगावा शोगुनेटको सेनाले हाकोदेटमा नयाँ सरकारी सेनाले आक्रमण गरे र आत्मसमर्पण गरे। यससँगै, मत्सुमा क्यासल पनि नयाँ सरकारी सेनाको नियन्त्रणमा आए। किनभने हाकोडाटेको गोरियोकाकू पश्चिमी शैलीको महल हो, मत्सुमा महल होक्काइडोमा रहेको एक मात्र जापानी शैलीको महल हो भनिन्छ। मत्सुमा महल पनि हो ...